किन हुन्छ ढाड र घुँडा दुख्ने समस्या ?
आज : २०७५ मङ्सिर २४ सोमबार / 10th December, 2018 [email protected]
अस्पतालको अर्थोपेडिक्स विभागमा धेरै मानिसहरु ढाड तथा र घुँडा दुख्ने समस्या लिएर आउने गर्छन् । करिब ७० प्रतिशत बिरामी यस्ता हुन्छन् । यस्तो समस्या सबैभन्दा बढी उमेरका कारण हुने गर्छ । जति उमेर बढ्दै गयो भने हड्डी उति खिइँदै जान्छ । ढाडको हड्डी खिइएर नशा च्यापिन्छ।
नशा च्यापिने कारण धेरै हुन्छन् । हड्डी खिइएर या साना–साना हड्डी पलाएर नशा च्यापिन सक्छ भने पछाडितिरबाट पनि नशा च्यापिन्छ । यस्तै चोटपटकले गर्दा हड्डीले नशा च्यापिन सक्छ । मेरुदण्डको क्षयरोग तथा ट्युमरले पनि नशा च्यापिने हुन्छ।
किन हुन्छ ढाडको समस्या ?
ढाडको समस्या खासगरी उमेरका कारण (एजिङस्पाइन)ले गर्दा हुने हो । तर, आजभोलि १७–१८ वर्षका किशोरमा पनि नशा च्यापिएको देखिन्छ । किन यस्तो हुन्छ भन्ने कारण अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन । अर्थात्, आजकाल नशा च्यापिने समस्या बढ्दै गइरहेको छ । खेलकूदमा बढी सरिक हुने बालबालिकामा नशा च्यापिनु स्वभाविक हो । तर खेलकुद नगर्नेमा पनि यस्तो समस्या हुने गरेको छ । २५ देखि ४० वर्षबीचका मानिसमा पनि यो समस्या बढ्दैछ ।
धेरैजसो एउटै आसनमा धेरैबेरसम्म बसेर काम गर्नेमा पेशा भएका मानिसमा यो समस्या देखिन्छ । कम्प्युटरमा धेरै काम गर्ने मान्छेलाई ढाड दुखाई बढी हुन्छ । एउटै पोजिसनमा धेरै समयसम्म बसेर हुने समस्यालाई मेकानिकल पेन भनिन्छ । मेकानिकल पेन सामान्य अभ्यासले ठीक हुन्छ । ठीक नभएमा सिटि स्क्यान, एमआरआइसमेत गरेर हेर्नुपर्छ । रोग पहिचान भएपछि त्यही हिसाबको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ।
ढाड दुख्नासाथ नशा च्यापियो कि भनेर सोच्छौं । नशा च्यापियो भने कहिलेकाहीँ खुट्टामा प्यारालाइसिस हुनेदेखि दिसापिसाबसमेत रोकिन सक्छ । जसको उपचार गर्न मुस्किल हुन्छ।
नशा च्यापिँदा खुट्टासम्म दुख्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कहिले ढाडमात्र र कहिले खुट्टामात्र दुख्ने हुन्छ । नशा च्यापिएकामध्ये ८५ प्रतिशत बिरामीलाई अपरेशन गर्नुपर्दैन । औषधि र शारीरिक कसरतले मात्र निको हुन्छ । १५ प्रतिशत नशा च्यापिएका बिरामीको मात्र अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो खालको रोगले नशा च्यापिएको हुन्छ, त्यस्तै किसिमको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उमेरको हिसाबले घुँडा खिइने हुन्छ । प्रायः जनसंख्यामा यस्तो समस्या देखिन्छ । २५ वर्षसम्मको उमेरसम्म कुनै समस्या देखिँदैंन । ३० वर्ष लागेपछि अलिअलि खिइन्छ । ५५ देखि ६० वर्षमा ५५ देखि ६० प्रतिशत मानिसको घुँडाको हड्डी खिइन्छ । रोगको समस्या हेरेर घुँडा फेर्न पनि सकिन्छ।
कुरकुरे हाडले गर्दा हड्डी खिइन सक्छ । कहिलेकाहीँ चोटपटकले गर्दा पनि लिगामेन्ट चुँडिने, च्यातिने हुन्छ । त्यसको बेग्लै किसिमको उपचार हुन्छ । यो समस्या जुनसुकै उमेरमा विशेष गरेर खेलकुद गर्ने मान्छेहरुमा समस्या हुन्छ।
हड्डीको कुनै हाड राम्रो छ भने पनि मेनस्कसचाहिँ च्यातिएको हुन सक्छ । कहिलेकाहीँ मेनस्कस सफा गरेर पनि दुखाइ कम गर्न सकिन्छ । मेनस्कस भनेको घुँडामा हुने नशा हो । यो च्यातिएर कहिलेकाहीँ घुँडा अड्कने समस्या पनि हुनसक्छ । यस्तो बेलामा पनि दुखाई हुन्छ । यो समस्या समाधान गर्न च्यातिएको नशालाई झिकेर मर्मत गर्न सकिन्छ । डिजेनेरेशन भएको छ भने उमेरको हिसाबले जोर्नीप्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ।
हड्डीमा ट्युमर र क्यान्सर भने कम जनसंख्यामा मात्र देखिन्छ । यो २ देखि ३ प्रतिशत मानिसमा देखिने सम्भावना हुन्छ।
(अर्थाेपेडिक एवं स्पाइन सर्जन)
१. कर्मचारी समायाेजनको आधार संघ र प्रदेश तथा स्थानीयमा छुट्टाछुट्टै, २१ दिनभित्र कार्यक्षेत्र पुग्नैपर्ने
२. यस्तो छ राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश (पूर्णपाठ)
३. स्वास्थ्य सचिवका रुपमा अधिकारीले पत्र बुझे, चिकित्सक संघ विरोधमा उत्रँदै
४. क्यान्सरसँग लडिरहेकी यी दुई वर्षे बालिका, जसले खोजिरहेकी छिन् दुर्लभ रगत
५. क्षयरोग र एड्स उन्मूलनका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन
६. स्वास्थ्य सचिवमा केदारबहादुर अधिकारी
७. हुनुपर्ने ४२ प्रकारका औषधि तर स्वास्थ्यचौकीमा जम्मा एउटा मात्र
८. संकटग्रस्त स्वास्थ्य– १ : ‘मल्टिअर्ग्यान फेल’ हुने अवस्थामा मन्त्रालय
९. बर्दिवास सर्पदंश उपचार केन्द्र सुविधा सम्पन्न बन्दै
१०. खुराक अनुशासनका १५ फाइदा, खुराक अनुशासनमा कसरी बस्ने?
२. कर्मचारी समायोजनमा ५ वटा आधार, सचिवको संयोजकत्वामा सर्वेक्षण समिति (यस्तो छ अध्यादेश)
५. यहाँ खटाइए भर्खरै लोक सेवा पास गरेका डाक्टर र नर्स, चाहेको ठाउँमा जान अधिकांसले भनसुन गराउँदै
६. स्वास्थ्य चौकीको प्रमुख हुन पाउनु पर्ने भन्दै एचए पुगे प्रशासन कार्यालय
७. क्यान्सरको उपचारपछि बलिउड अभिनेत्री सोनाली घर फर्किइन्, के हो उनलाई लागेको क्यान्सर?
८. लाइसेन्सिङ परीक्षामा ५६ प्रतिशत डाक्टरी विद्यार्थी फेल
९. न्याम्स र बिपी प्रतिष्ठानको उपकुलपति आफूअनुकूल बनाउन स्वास्थ्यमन्त्री यादव सक्रिय, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँग चर्काचर्की
१०. स्वास्थ्य सचिवका रुपमा अधिकारीले पत्र बुझे, चिकित्सक संघ विरोधमा उत्रँदै